Project တစ်ခု ကိုင်တွယ်တော့မယ်ဆိုရင် ကြီးကြီး သေးသေး၊ ဖော်ပြထားတဲ့ အချက်နဲ့ တကယ်လုပ်ရမဲ့ အချက် ကွဲပြား ခြားနားမှုများ နဲ့ ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များ နောက်ကွယ်မှာ ရှိနေတဲ့ ထည့်သွင်း တွက်ချက်ရမဲ့ အရေးကြီး အချက်အလက် တွေကို နားလည် သဘော ပေါက်ထားဖို့ လိုတယ်။ အောင်မြင်တဲ့ Project Management ဆိုတာတွေ ထဲမှာ Project အဖွဲ့ရဲ့ ရုန်းကန် လှုပ်ရှားရတာတွေ၊ အခက်အခဲ ပြဿနာတွေ၊ အားနည်း ချို့ယွင်းချက်တွေကို ဖော်ပြတာ အင်မတန် နည်းပါးပါတယ်။ စာရေးသူ Herbert Lovelace ကတော့ ဒီ အဖြစ်အပျက်ကို ပြင်ဆင် ချက်ပြုတ်ချိန်မှာ ညစ်ပေနေသမျှ စားသုံးသူတွေကို ပြတဲ့ခါ သန့်ရှင်းသပ်ရပ် လှပနေတတ်တဲ့ မီးဖိုဆောင်နဲ့ တူတယ်လို့ ဆိုစမှတ် ပြုပါတယ်။
Project ကို ဘယ်လို စီမံ ခန့်ခွဲရမယ်ဆိုတာကို စာအုပ်ကြီး အတိုင်းပဲ နားလည်ထားမယ် ဆိုရင်ကို ဘယ်သူ့အတွက်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် အထောက်အကူ ပြုပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ အောင်မြင်တဲ့ Project Manager တစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ Project မှာ ပါဝင် ပတ်သက်နေတဲ့ လူ အများအပြားရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ၊ အဓိကကျတဲ့ အခက်အခဲ ပြဿနာတွေ၊ Project အောင်မြင် ထမြောက်တယ်လို့ မဆိုနိုင်ခင်မှာ ရှင်းလင်း ဖော်ဆောင်ရမဲ့ အချက်အလက်တွေကို နားလည် သဘောပေါက်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ ကျွန်မ အတွေ့အကြုံအရ ပြောရရင် Project Management ဆိုတာသည် အယင်က လုပ်ခဲ့တဲ့ Project တွေကနေ ရခဲ့တဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ၊ အတွေးအမြင်တွေရဲ့ အထွတ်အထိပ် ဖြစ်ပြီးတော့ အခြေအနေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ ပြုပြင် လုပ်ဆောင်သွားရခြင်းလို့ ဆိုချင်ပါတယ်။ Project တစ်ခု သတ်မှတ်ထားတဲ့ လမ်းကြောင်းအတိုင်း ချောမွေ့အောင်မြင်စေဖို့ အထောက်အကူပြုစေမဲ့ ပြန့်ပြောကြွယ်ဝတဲ့ လမ်းညွှန်ချက်တွေလည်း ရှိနေပါတယ်။
၁ ။ သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ခြင်း။
Project တစ်ခု မစတင်မီမှာ အခက်အခဲ၊ Project မျှော်မှန်းချက် စတာတွေ တိတိပပ သတ်မှတ်ဖော်ထုတ်ပါ။ Project ရဲ့ ရည်မှန်းချက်၊ မျှော်မှန်းချက်ကို စာရွက်နဲ့ ချရေးပြီး ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူ အားလုံး ဖတ်ရှုနားလည် သဘောပေါက်အောင် လုပ်ထားခြင်းဟာ အကောင်းဆုံး နည်းလမ်းပါပဲ။ နောက်ပြီးတော့ စည်းဝေးပွဲ အခမ်းအနားမှာ Project ရည်မှန်းချက် အပေါ်မှာ အဖွဲ့သား အားလုံးရဲ့ သဘောတူညီချက်ကို ရယူပါ။ ဒီလုပ်ဆောင်ချက်က Project ပိုင်ရှင်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ အားလုံးကို Project ကာလ တလျှောက်လုံး ဖော်ထုတ် ပြသဖို့ လိုတဲ့ အချိန်တိုင်းမှာ အထောက်အကူ ပြုနေမှာ ဖြစ်ပြီးတော့ Project အဖွဲ့တွင်း ကြုံတွေ့ရနိုင်တဲ့ အရင်းအမြစ်၊ ပစ္စည်းပစ္စယများ နဲ့ ဦးစားပေး အစီအစဉ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ၀ိဝါဒ ကွဲပြားမှုတွေကို ဖြေရှင်းရာမှာလည်း အထောက်အပံ့ ဖြစ်စေပါတယ်။
၂ ။ အစီအစဉ်ချမှတ်ခြင်း။
ဘာတွေ လုပ်ရမယ် ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာတွေကို အစီအစဉ်ချတာပါပဲ။ ကိစ္စရပ် တစ်ခုချင်းစီအတွက် အစီအစဉ်ချတဲ့ နေရာမှာ သိပ်မခက်ခဲပေမဲ့လို့ Project အဖွဲ့သား အားလုံး သဘောတူညီမှု ရရှိစေမဲ့ အစီအစဉ် ချမှတ် လုပ်ဆောင်ရာမှာတော့ အတော်အတန် ပိုမို ခက်ခဲ ပါလိမ့်မယ်။ အစီအစဉ်ချမှတ်ခြင်းရဲ့ တစိတ်တဒေသ အနေနဲ့ ဘယ်သူက ဘာတွေ ပြီးအောင် ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာရယ် သူရဲ့ ဒီပရောဂျက်မှာ ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ဘာ ဆိုတာရယ်ကို စာရွက်ပေါ်မှာ ရေးချ လက်မှတ်ရေးထိုးခိုင်းပါလို့ အကြံပြုလိုပါတယ်။ လူတွေ အနေနဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ခုမှာ သူ့ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍက ဘာဆိုတာကို တိတိပပ သိထား နားလည်ထားရင် လုပ်ဆောင်ချက် အထမြောက် အောင်မြင်စေဖို့ ပိုမို အားသွန်ခွန်စိုက် ဆောင်ရွက်လေ့ရှိတတ်တယ်။ ကျွန်မတို့ လုပ်ငန်းထဲမှာတော့ ကန်ထရိုက်နဲ့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့ ကိစ္စတွေမှာ Project အတွင်း ဘာတွေ လုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ အသေးစိတ် အချက်အလက်ကို ထည့်သွင်း ရေးဆွဲထားတဲ့ လုပ်ဆောင်ရမဲ့ အခန်းကဏ္ဍ သဘောတူညီချက် စာတမ်းကို အသုံးပြုပါတယ်။ ဒီစာတမ်းကို သုံးခြင်းကြောင့် Project အဆုံးမသတ်ခင်မှာ Project တွင်း တာဝန်ဝတ္တရားများ၊ ပြီးမြောက်ရမဲ့ ကိစ္စရပ်များ၊ အချိန်သတ်မှတ်ချက်များ ကို ပြတ်ပြတ်သားသား ရေးဆွဲနိုင်ပါတယ်။ နောက်ထပ် သတိထားရမဲ့ တစ်ချက်ကတော့ သင်ဟာ စနစ်တစ်ခု ထည့်သွင်း အသုံးချဖို့ ရည်ရွယ်ခဲ့လို့ အကယ်၍ အဲဒီစနစ်ကို သူများ နားလည်အောင် ရှင်းမပြနိုင်ဘူးဆိုရင် အဲဒီစနစ်ကို မသုံးတာ ကောင်းတယ်။
၃ ။ လက်တွေ့အသုံးချခြင်း
အစဉ်သဖြင့် ရှုပ်ထွေးတတ်တယ် ဆိုတာ သတိရပါ။ လက်တွေ့ အသုံးချခြင်းကို ရိုးရှင်းနိုင်သမျှ ရိုးရှင်းအောင် ဆောင်ရွက်ပြီး၊ အကယ်၍ မအောင်မြင်ခဲ့ရင် မူလအတိုင်း ပြန်ရှိနေစေအောင် နည်းဗျူဟာချ လုပ်ဆောင်ပါ။ မထင်မှတ်ဘဲ တွေ့လာရတဲ့ ရလဒ်တွေအပေါ် သင် ဘယ်လို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းသလဲ ဆိုတဲ့ ကိစ္စက အောင်မြင်မှုနဲ့ ကျရှုံးမှုကို နှစ်ခုစလုံး ဖြစ်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ အရေးကြီးတဲ့ အဆုံးအဖြတ် မရေမရာ တာမျိုး၊ အဖြေ မထွက်တာမျိုး ဖြစ်စေပြီး Project အဖွဲ့ကို အချိန်ပို လုပ်ဆောင်ခိုင်းခြင်းမျိုးနဲ့ Project အဖွဲ့ စိတ်ဓာတ်ပျက်ပြားအောင် မလုပ်မိပါစေနဲ့။ အဖွဲ့သား အားလုံး သတင်းအချက်အလက် မပြတ်စေဖို့နဲ့ Project အတွက် တာဝန်ရှိနေတယ်ဆိုတာ သိအောင်ဆောင်ရွက်ပါ။ အချိန်နဲ့ တပြေးညီ ပြီးမြောက်မှုကို အဟန့်အတား ဖြစ်စေမဲ့ မမျှော်လင့်ထားတဲ့ ကိစ္စတွေ ဖြစ်လာခဲ့ရင် နောက်ပြန်ဆုတ်ဖို့လည်း မတုံ့နှေးစေဖို့ လိုပါတယ်။
၄ ။ ပြန်လှန်သုံးသပ်ခြင်း
ဒါက တန်ဖိုး အရှိဆုံးကိရိယာ တစ်ခုပဲ။ Project တစ်ခုပြီးသွားတဲ့ နောက်ပိုင်းကျမှ ဘယ်နေရာလေးကို ဘယ်လိုလေး လုပ်လိုက်ရမှာ၊ အဲလိုလေး ပြောင်းလုပ်လိုက်ရင် ကောင်းမှာ ဆိုတာမျိုးတွေ တပုံတပင် သိရတတ်ပါတယ်။ Project ကာလ အတွင်းမှာ အဲဒီ ကိစ္စတွေကို မှတ်တမ်း အနေနဲ့ စုဆောင်း ထည့်သွင်းထားရင် ပိုပြီး အထောက်အကူ ဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်။ ဒီမှတ်စုလေးကို Project ပြီးဆုံးသွားတဲ့ နောက်မှာ ဘယ်ကိစ္စရပ်တွေ လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ဘယ်လို အဆင့်မြှင့်တင်ဖို့ လိုအပ်တယ်ဆိုတာ ပြန်လည် သုံးသပ်နိုင်စေဖို့ အသုံး ချနိုင်ပါတယ်။ Project အပြီးမှာ ပြုလုပ်တဲ့ တုံ့ပြန်မှု ပေးနိုင်မှာ သေချာတဲ့ အဖွဲ့သား အားလုံး တက်ရောက်တဲ့ Project အဖွဲ့ အစည်းအဝေးမှာ ပါဝင် ပတ်သက်သူ အားလုံးဆီက တန်ဖိုးရှိတဲ့ သတင်းအချက်အလက်တွေ ရနိုင်ပါတယ်။
Project Manager တွေဟာ စနစ် ပုံစံကျတဲ့ နည်း ဥပဒေများကို သင်ယူ လေ့လာထားရပါမယ်။ ရှေ့က လုပ်ဆောင်ဖူးတဲ့ သူများ အခြား အတွေ့အကြုံ ရင့်ကျက်တဲ့ Project Manager များထံမှ အကူအညီတွေ ရယူပြီး လက်တွေ့ အသုံးချ ရပါမယ်။ အရှင်းဆုံး ပြောရရင် ကိုယ်တိုင် ၀င်ရောက် လုပ်ကိုင်ခြင်းထက် Project Management နဲ့ အစီအစဉ်ချခြင်း အတွက် အကျွမ်းတ၀င် ရှိလာစေမဲ့ တခြား နည်းလမ်း မရှိပါဘူး။ အောင်မြင်တဲ့ Project တစ်ခု ဖြစ်စေဖို့ အသုံးပြုတဲ့ စတင်တဲ့ အချိန်မှာ သုံးတဲ့ နည်းဥပဒေသ (ဒါမှမဟုတ်) စံ နမူနာများက လွဲရင် ချွေးထွက်တဲ့ ပင်ပန်းမှု၊ အသင်းအဖွဲ့နဲ့ ဆောင်ရွက်မှု၊ ကြိုးပမ်း အားထုတ်မှုနဲ့ ကိုယ်တိုင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်မှုတွေက အစားထိုးမရတဲ့ အရင်းအနှီးတွေပဲ။ အထက်က အချက်လေးချက်ကို အသုံးချပြီးတော့ သင်ကြုံ ရနိုင်တဲ့ အခက်အခဲ၊ ပြဿနာ အရေအတွက် ပမာဏကို လျော့ကျအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်။
စာရေးသူ မီရှဲလ် (Michele Webb)သည် ကိုယ်ပိုင်အင်တာနက် စာမျက်နှာ ပိုင်ဆိုင်ပြီး အမျိုးသမီး အင်တာနက် စွန့်ဦးတီထွင် လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်းတော်တော်များများမှာ အဖွဲ့ဝင် ဖြစ်ပြီးတော့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၊ နီဗားဒါးပြည်နယ် လပ်စ်ဗေးဂတ်စ်မှာ သူမရဲ့ ခွေး၂ကောင်နဲ့ နေထိုင်ပါတယ်။ မီရှဲလ်ကို ဆက်သွယ်ဖို့ အီးမေးလ်လိပ်စာက news@ebooksnstuff.com ဖြစ်ပြီး သူ့အင်တာနက် စာမျက်နှာက www.ebooksnstuff.com ဖြစ်ပါတယ်။
Project Management Basics (Original Version)
For Furthur Reading...
ဒီပို့စ်ရဲ့ Comment မှာ ကိုအောင်က ဒီလို ရေးသွားပါတယ်။
"ဟေ့လူ။ Project Management ကို စိတ်ဝင်စားရင် O'REILLY က ထုတ်တဲ့ Head First PMP စာအုပ်ကို ဖတ်ကြည့်။ 4shared.com မှာ pdf download လုပ်လို့ရတယ်။ PM အကြောင်းရှင်းတာ အလွန်လွယ်ပြီး အလွန်ထိမိတယ်။ ..... "
အဲဒီအတွက် မောင်လူအေး သွားရောက် မွှေနှောက်ပြီး သကာလ Download လုပ်၊ လိုအပ်သူများ လွယ်လင့်တကူ ကူးယူနိုင်စေဖို့... Hosting တစ်ခုမှာ ပြန်တင်ပြီး ပြန်ဝေမျှ လိုက်ပါတယ်ဗျာ... အောက်က ပုံလေးကို ကလစ်လုပ်ပြီး Download လုပ်နိုင်ပါကြောင်း...
ဝေမျှပေးတဲ့ ကိုအောင် ကိုလည်း ကျေးဇူးပါဗျာ...
Filed Under : Engineering, Project Management, Translation
ုkom: သေချာရေးထားတာဘဲ။ :P
ဟေ့လူ။ Project Management ကို စိတ်ဝင်စားရင် O'REILLY က ထုတ်တဲ့ Head First PMP စာအုပ်ကို ဖတ်ကြည့်။ 4shared.com မှာ pdf download လုပ်လို့ရတယ်။ PM အကြောင်းရှင်းတာ အလွန်လွယ်ပြီး အလွန်ထိမိတယ်။
i like your blog interface. How can i try for drop down? I want to know that.
I've been browsing online more than three hours these days, yet I by no means discovered any attention-
grabbing article like yours. It’s lovely price enough for me. Personally, if all webmasters and bloggers made just right content as you did, the web can be much more useful than ever before.
Here is my blog: http://lochcarrongarage.com
Feel free to visit my homepage; biharfoundation.in
actually bought me lunch because I found it for him smile Thus
my web page - Www.Szakibazis.com
I want to express thanks to
scenario. Just after scouting through the online world and
views which are not beneficial, I figured my life was
approaches to the difficulties you've fixed all through the blog post isacrucial case, and the ones that could have negatively
affected my entire career if I had not discovered your site. That natural talent and kindness in controlling every aspect was excellent. I'm not sure what I would've done if I hadn't
come across suchasolution like this. I'm able to at
result oriented guide. I will not hesitate to propose your web sites to any individual who would like tips
my site: http://Www.Joboloco.com/profile/perrylww
My webpage ... ourauthors.com
reality then again I will certainly come
Here is my website - http://Tajblog.com
Feel free to visit my blog post - trains from orihuela to madrid